China Carbon fibre shaft rivotra fanamboarana sy orinasa | Yan Tuo
Kitapo rivotra fibre karbonika
Fotoana fohy fiasan'ny fiakaran'ny vidim-piainana: 3 segondra monja no manasaraka sy mametraka ny tsiranoka tsy azo atsofoka sy ny fantsom-taratasy mba hamenoana ny vidim-piainana sy ny fihenam-bidy. Tsy mila manala ampahany amin'ny faran'ny hazo izy mba hifandraisana mafy amin'ny fantson'ny taratasy.
Aluminium, Fibre Carbon
Masinina rehetra miolakolaka sy milina tsy ahosotra
1200 * 75 * 59 / Araka ny takiana
Fampisehoana sary amin'ny antsipiriany
Fitsipika miasa: Amin'ny alàlan'ny fanitarana ny kitapo fiaramanidina tokana, mivelatra ny lakile, ary hamafisina ny fotony.
Tombony: 1. Noho ny rafitra clip-on tsy manam-paharoa, ny airbag dia azo soloina mora foana aorian'ny fivoahana ny lohan'ny hazo, raha tsy mila fitaovana manokana.
2. Ny lanjan'ireo vatan-kazo misy kitron-drakitra karbaona dia 1/3 fotsiny amin'ny tsiranoka nentim-paharazana, izay tena mety amin'ny enta-mavesatra sy ny fikirakirana ny tanana amin'ny famoahana sy ny famoahana entana. Izy io dia afaka mampihena ny ratra amin'ny asa ataon'ny mpandraharaha amin'ny fikirakirana, ary afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa.
3. Ny firafitra anatiny dia natao mba tsy hamoahana fihetsiketsehana mahery setra amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha.
4. Hery lehibe. Azo ampiharina amin'ny filan'ny fampiharana isan-karazany
5. Ny fitsaboana manokana eto an-tany dia azo ampiasaina amin'ny tontolo manokana samihafa (tsy misy vovoka, manimba, tontolo iainana avo).
Mampiasa: Mety amin'ny shafts azo esorina amin'ny firakotra, ny fikorisana, ny fanontana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny laminating, ny fanaovana taratasy, ny fanamboarana kitapo, ny plastika ary ny milina hafa mifandraika amin'izany, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Ny fantsom-panafody dia rivotra miolikolika, tsofa fanitarana, hazo fanitarana, roller mihosin-tsofina, vatan-tsipika, tsindry tsindry sns. Ny vatan-kazo tsy mety simba sy ny tanany azo volena dia tena mety ampiasaina.
1. Fotoana fiasan'ny fiakaran'ny vidim-piainana fohy: 3 segondra monja no manasaraka sy mametraka ny tsofa tsy azo atsofoka sy ny fantsom-taratasy mba hamenoana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fihenam-bidy. Tsy mila manala ampahany amin'ny faran'ny hazo izy mba hifandraisana mafy amin'ny fantson'ny taratasy.
2. Ny fantsom-taratasy dia mora apetraka: ny fantsom-taratasy dia azo esorina sy amboarina amin'ny toerana rehetra eo ambonin'ny vatan-kazo miaraka amin'ny hetsika fampidinana sy fametahana.
3. Ny lanjan'ny enta-mavesatra: ny savaivon'ny zorony dia azo faritana arakaraka ny filan'ny mpanjifa, ary ny vy vy henjana dia ampiasaina hampitomboana ny lanjan'ny enta-mavesatra.
4. Fahombiazana ara-toekarena avo lenta: ny zana-kazo dia natao ho toy ny lahasa manokana, izay azo ampiasaina amin'ny karazana fantsom-taratasy matevina, manify, malalaka ary tery.
5. Fikojakojana tsotra sy fotoana fampiasana ela: Na dia fitaovana mekanika aza ny tsipika inflatable, ny ampahany tsirairay amin'ny rafitr'izy ireo dia manana famaritana voafaritra ary azo ampiasaina hifanakalo, manamora ny fikojakojana azy.
Misy 1 santimetatra, 1,5 santimetatra, 2 santimetatra, 2,5 santimetatra, 3 santimetatra, 6 santimetatra, 8 santimetatra, 10 santimetatra, 12 santimetatra, tanany fanitarana rivotra, sns., Arakaraka ny filan'ny mpanjifa, azo zahana ny famaritana samihafa momba ny hazo fanitarana rivotra. ary namokatra.
Ny vatan'ny fanitarana ny rivotra dia manana fampiasa betsaka: ny milina misy famerenana, ny famaohana ary ny fikorisana dia azo ampiasaina amin'ny hazo fanitarana rivotra.
Mety amin'ny fitaovana fanontana: milina fampirantiana, milina fanontam-pirinty flexo, milina gravure, milina fanontana marika famantarana sns.
Mety amin'ny fitaovana mekanika hafa: milina fanosotra, milina hoditra, milina fametahana, milina embossing, milina fanapahana, milina fanapahana maty, milina fanodinana taratasy, milina fanosotra, milina fanosotra, Masinina mitsoka horonantsary, milina mandrehitra, milina fanosotra, milina fanaovana embossing, milina taratasy , milina tsy tenona, masinina fanaraha-maso lamba, milina fanaovana hajia mahamay, fitaovana bateria ary fitaovana hafa manampy amin'ny fampiasana azy.
Manaraka: Taratry ny takelaka fibre karbonika